Arkady Renko usoro, Martin Cruz Smith si onye nyocha Russia | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Arkady renko bụ onye na-achọpụta ihe ruso protagonist nke usoro akwukwo ndi edere North America dere Martin Cruz-Smith. Nke izizi pụtara na Ogige Gorky, na 1981, ma nwee ndị ọzọ Isi 7 ọzọ nke ahụ enweela ezigbo ihe ịga nke ọma na ndị nkatọ na ọha na eze, na mgbakwunye na ịnweta ọtụtụ onyinye nke ojii, dị ka Edgar ma ọ bụ Hammett. N'ụbọchị ụlọnga a, agụghachiwo m ụfọdụ. Yabụ ebe ahụ nyochaa a na-aga. Maka ndị na-amaghị ya ma ọ bụ nye ya ndị na-amaghị ya.
2 Arkady Renko usoro
2.1 Ogige Gorky
2.3 Ogige Uhie
2.4 Ebe obibi Havana
2.5 Oge nkịta
2.6 Mmụọ Stalin
2.7 Oge atọ
Ihe mbụ dọtara m n'ebe Arkady Renko nọ bụ ihe osise ahụ na-egbu egbu ma na-atụ anya nke omume ha, nke a na-ahụkarị n'ihe ha na-akpọkarị "Mkpụrụ obi Russia". Ọ na-atọ ọchị, ịbụ onye okike America na onye nna nna Spanish dịka Martin Cruz Smith. Ọzọkwa, mgbe ị zutere ya Ogige Gorky, na ihe mere ndị mụrụ ya, anyị makwaara nke ahụ ọchịchọ nke katọrọ mmadụ na ibibi onwe ya. Ma ọ dịkwa oke nwere ọgụgụ isi, obi abụọ N'ịbụ onye nwere atụmanya dị mma maka ọdịnihu, karịsịa maka ya, ma n'otu oge ahụ, ọ gaghị enyere aka bụrụ onye na-enweghị atụ, onye a na-apụghị ire ure, ezi uche y okpono. Ọ na-egosi ya oge ọbụla ọ hụrụ ya n’anya, n’agbanyeghi na ọ nwere ike ịma oke ịhụnanya ahụ na-efu ya.
Okwu ikpe gị na usoro a ga - akpọrọ gị site na ndị ọzọ na-eme ihe, ebe ọ bụ na United States na Cuba, na ebe ndị ọzọ dị ka Chernobyl. Afọ ga-agakwa maka ya, ma site na 80s anyị ga-abata na Oge Putin, ebe akụkọ ikpeazụ ya mere, Tatiana.
Usoro nke Arkady renko
La akpa akwụkwọ bụ ikekwe kacha mara amara. E bipụtara na 1981, n'ime ya Arkady Renko na-enyocha ihe ọdịdị nke ozu atọ A hụrụ na Gorky Park nke Moscow. Ihu ha na mkpịsị aka ha na-efu, na-egbochi njirimara. Renko ga-achọpụta na ikpe a ihe gbasara mba ụwa. Ma ha KGB, na J.Randall Soviet na a abaghị uru onye ọchụnta ego America ha chọrọ iwepụ Renko na nyocha ahụ. Nanị ihe ha na-enweta bụ na ọ na-ekwusi ike idozi ya n'agbanyeghị nsogbu ọ ga-akpatara ya. N’etiti ya niile Hụbara n'anya si na nwanyi o na amaghi ma o gha tukwasi obi.
Aha ya bu ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri nke netwọkụ ya gosipụtara aru nwata nwanyi nke ahụ bụ nke gị ndi oru ugbo. Y Arkady Renko na-arụ ọrụ na ya, Kedu ihe na-akụ bụbu onye nyochadị ka ewepụrụ ya n'ọfịs maka "ndọrọ ndọrọ ọchịchị" mgbe ikpe Gorky Park gasịrị. Ma ọ bụ ezie na ọ dị ka a igbu onwe ya, Onye isi ụgbọ mmiri na-arịọ gị ka ị nyochaa.
Tọọ mgbe odida nke komunizim, na akwụkwọ akụkọ a Arkady Renko ga-enyocha ihe ndị a ọnwụ nke onye banki ejikọtara na ifo. Ọ ga-ezute ọzọ Irina Asanova, nwanyị ọ hụrụ n'anya ma zute na Ogige Gorky nke ahụ bụkwa ihe kpatara ọdịda ya site na amara n'ime usoro ahụ.
Ebe obibi Havana
Oge a Renko ga-aga Havana gaa mata ozu onye Russia nke ahụ pụtara n'ebe ahụ. Renko ga-achoputa obodo o na-echeghi na nke a ghaju ya anya. Ga-enwekwa soro ndị uwe ojii mara mma nke Cuban rụọ ọrụ, a ga-ahụkwa ha na ememe Santeria, onye America onye gbara oso na otu ìgwè nke mercenaries. Mana ọ ga-ewe obere oge iji nwee anụrị ihe nke ndụ gị.
El o yiri ka igbu onwe ya nke Pasha Ivanov, otu n'ime ndị ọchụnta ego ọhụrụ Russia, bụ ikpe nke Arkady Renko ga-edozi ma ọ nwere ike bụrụ ihe kacha enigmatic ruo ugbu a. A ikpe ga-eduga gị Chernobyl, gburugburu ebe obibi nke ga eme ka nchoputa ahu di ike.
Ọzọ ka edoziri na Moscow, ọ na-agwa anyị gbasara ihe omimi dị omimi nke na-eme mgbe ọtụtụ ndị njem ụgbọ oloko na-ekwu na ha ahụla mmụọ Stalin n’otu ọdụ ụgbọ mmiri ya. Ihe yiri ihe na-adịghị mkpa dị oke njọ mgbe Renko chọpụtara nke ahụ ndị nchọpụta abụọ a na-akwanyere ùgwù nwere ike tinyere. Ihe ndị ahụ e chere dị anya jikọtara ya na a otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke otu n’ime ndị na-achọpụta ihe a bụ ọgụ. Ndị otu ahụ na-ezobe data dị mkpa gbasara ihe mere na Chechnya na 90. Ma Renko ga-achọpụta ihe nzuzo ndị ọzọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Agha Worldwa nke Abụọ.
Na a tren ndabere, a nne dị afọ iri na ụma na naanị ya na a onye agha na ebumnuche ọjọọ n'ebe ọ nọ, na akwụkwọ akụkọ a Renko ga-enyocha ihe ndị a efu efu nke nwa nke enweghị ntụpọ dị.
Ikpeazụ bipụtara aha na-agwa ndị ihe ndabara n'etiti ọnwụ, n'otu izu ahụ, nke onye oru nta akukoTatiana Petrova, na otu billionaire mobster. Arkady ga-esochi ihe omume abụọ ahụ Kaliningrad, "Obodo nzuzo" nke agha oyi. Site na nyocha nke gara aga nke Tatiana, Arkady ga-ahụ ụfọdụ ụmụaka gbahapụrụ na akwukwo ntughari okwu onye nwuru anwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Arkady Renko usoro, Martin Cruz Smith si onye nyocha Russia